Konke odinga ukukwazi mayelana nokwehla kwamakhaza eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela ulizwile igama lokuthi iconsi elibandayo lapho lezi zikhathi zifika. Futhi kungenxa yesimo sezulu esivame ukwenzeka cishe njalo ngonyaka. Isizathu esenza kukhulunywe kabanzi ngalo mkhuba yingoba uhilela izimvula ezinamandla, imvamisa zinodlame oluningi, okudala ukuvunguza okukhulu komoya kanye neziphepho ezincane.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini i-blob ebandayo futhi yakhiwa kanjani? Qhubeka ufunde ngoba kulokhu okuthunyelwe sikutshela konke.
1 Isimo sezulu esibi kakhulu
2 Kwakhiwa kanjani iconsi elibandayo
5 Ukwehla kwamakhaza kwezinye izifundazwe
Isimo sezulu esibi kakhulu
Ukwehla kwamakhaza kubhaliswe cishe njalo ngonyaka ngalesi sikhathi. Idonsela ukunakwa okuningi kunikezwe ukuthi udlame lwayo ludlulele. Phakathi kwamarekhodi, amarekhodi emvula anqwabelene anqotshwe ngehora elilodwa nje. Lezi iziqephu ezimbi ngokweqile ezingadala umonakalo omkhulu nokubhujiswa emadolobheni. Ngenxa yalokho, amadolobha amaningi awanazo izinto eziphehla ugesi futhi nengqalasizinda iyavuma.
Lokhu kwehla okubandayo kungokwezici zethu Isimo sezulu saseMedithera lapho zibhaliswe khona imvula ayiningi kakhulu futhi igxile ebusika. Ngokuvamile, imvula eningi inesikhukhula futhi ihambisana nomonakalo omningi.
Lapho kuqoshwa imvula Akusho ukuthi lezi zimvula ezinodlame zenza imvula yaminyaka yonke inyuke kakhuluEsikhundleni salokho, zigxila esikhathini esifushane. Akuzona zonke izindawo eSpain ezinamazinga emvula afanayo, kepha kunalokho zigxilwe endaweni encane. Kungenzeka ukuthi edolobheni elilodwa imvula eningi idedelwa, kuyilapho edolobheni elingumakhelwane sinezimvula ezincane nje.
Njengoba sishilo ngaphambili, Akukona okokuqala ukuthi uhlupheke ngamaconsi abandayo aqukethe imvula enamandla, kepha zenzeka ngemuva kwehlobo ngenxa yokuhlangana kwenqwaba yomoya. Izithombe ezisishiyela lezi ziqephu ezimbi kakhulu ziyamangalisa futhi zidala ukubhujiswa ngezindleko ezinkulu zomnotho.
Kwakhiwa kanjani iconsi elibandayo
Kepha sihlala sikhuluma ngobukhulu balezi zimvula nemiphumela ezinayo futhi asikhulumi ngokuthi yenziwa kanjani. Yini ebangela isimo esinje? Yebo, ngokusho kweState Meteorological Agency, i-AEMET, ikhomba umsuka wale nto ku ukucindezeleka okukhulu ekuphakameni kwengcindezi lapho engxenyeni emaphakathi kunomoya obanda kakhulu.
Ubukhulu bomoya ophakeme (cishe amamitha ayi-5.000 XNUMX ukuphakama) okwehlisa ingcindezi yayo kakhulu maqondana nomoya owuzungezile. Lokhu kucindezeleka ekuphakameni kunesikhungo somoya obandayo futhi kudala amafu esiphepho avula amazinga emvula apocalyptic. Lapho kukhulunywa ngalolu hlobo lwesimo, izindimbane zomoya ezinkulu ezivela ezinkulungwaneni zamakhilomitha abakwazi ukuhamba ngazo bachazwa.
Lokhu kuphazamiseka nokwehla okukhulu kwengcindezi akunamthelela ngokushesha noma kukhombisa ebusweni bomhlaba. Lokho wukuthi, asikuboni ezingeni lethu lokuphatha ngqo. Kodwa-ke, ukuhlolwa kokulinganisa kwenziwe lapho kukhonjiswe khona ukuthi ukwehla kwamakhaza kuhlala kunokubonakaliswa emazingeni aphansi. Izinkomba ezivame kakhulu imimoya, imvula, ushintsho olungazelelwe ekushiseni noma ngisho nasekucindezelekeni. Ngenxa yalokhu, ukwehla okubandayo kungatholakala ngesikhathi ukuvimbela imiphumela yayo.
Abantu bavame ukudida ithonsi elibandayo nalezo zimvula eza nomoya obandayo. Kuyiqiniso ukuthi lolu hlobo lwemvula imvamisa luba umphumela wokwehla kwamakhaza. Noma kunjalo, awafani. Ukwehla okubandayo yisikhathi esenzeka ngenxa yezici zesimo sezulu saseMedithera kanye nokudangala kokuphakama ngenxa yezinhlobo ezahlukene zomoya.
Isici esiyinhloko sokwehla kwamakhaza ukuthi sibe nemvula enkulu ewela emizuzwini embalwa nje nasendaweni ethile. Uma lina ngendlela enamandla ngesikhathi esifushane, uma indawo lapho liwela khona lisedolobheni noma edolobheni, ingqalasizinda ayilungiselelwe ukumelana nokuhambisa amanzi amaningi kangaka. Ngenxa yalokho, imiphumela iyinhlekelele, idala umonakalo omkhulu wezinto ezibonakalayo futhi ibulale nemiphefumulo.
Ake ucabange ukuthi usemotweni nokuthi izikhukhula zigcina zikushayile zikuhudule ngamandla amakhulu. Akunakwenzeka ukubalekela kulesi simo ngaphandle kosizo lwangaphandle. Le mvula enamandla nesiphepho akulona ithonsi elibandayo uqobo, kepha kunalokho yizinto ezihambisana nakho.
Ngokuya nge-AEMET, ukwehla kwamakhaza kusetshenziselwa ukubhekisa ngokuhlangene ezenzakalweni zemvula enamandla, eyingozi nenhlekelele eholela ezimweni eziyingozi kakhulu zezulu. Inkinga ukuthi lo mqondo awulungile. Ngalesi sizathu, i-AEMET ayisasebenzisi leli gama, okuholela ekudidekeni. Ukwehla okubandayo njengomqondo kuhlanganisa izinto eziningi ezinganembile.
Kuyikhadi lasendle elisetshenziselwa ukukhuluma ngezimo ngendlela eyisicaba. Esikhundleni sokusebenzisa leli gama, okulungile kakhulu kungaba izivunguvungu ezinamandla nemvula eqhubekayo, ngoba kungaba khona ngaphandle kokwehla kwamakhaza. Ukwehla okubandayo kuphathelene nokucindezeleka kokuphakama kuphela. Kodwa-ke, kungahle kube neziphepho ezinamandla futhi ezibhubhisayo futhi hhayi ukucindezeleka kokuphakama.
Ngenxa yalokhu kudideka, hhayi kuphela kubantu kepha naphakathi kwezazi zezulu, iyanqanyulwa. Kuphela eSpain naseJalimane lapho lo mqondo usasetshenziswa, kepha kuncane futhi kuncane.
Ngenxa yezimo zezulu zezimvula ezinamandla nezesabekayo, amadolobha namadolobha athintekile agcwala amanzi, kusuka emigwaqweni, ezimotweni kuya ezindlini nasemakamelweni angaphansi. Amadolobha amaningi basala bengenawo ugesi noma amanzi. Ngokuya ngosayizi nokuhamba, imifula igcina ichichima.
Ukwehla kwamakhaza kwezinye izifundazwe
Ukwehla okubandayo akuthinti zonke izindawo eSpain ngokulinganayo. Sizokhuluma ngezinye izifundazwe lapho zithinta kakhulu khona.
Ukwehla okubandayo eValencia Idale izikhukhula eziningi, ukunqanyulwa kukagesi nemifula echichimayo. Kushiya abafundi abangaphezu kuka-40 bengenasikole.
Ukwehla okubandayo eCastellón ishiye irekhodi lemvula enamalitha ayi-159 amanzi ngehora elilodwa ngemitha eyisikwele. Izicishamlilo kudingeke zenze okuthile ukusindisa izimpilo futhi iziqukathi zikadoti zikhukhulwe ngamandla amanzi.
Ukwehla okubandayo e-Alicante kubuye kudale umonakalo omkhulu kulesi sifundazwe. Kodwa-ke, kuleli cala ube nokuqeqeshwa okuningi kwenhlanhla eGibraltar. Njengoba kushiwo ku-athikili ye-DANA, okuvame kakhulu ukuthi yakhiwa ngomumo osentshonalanga-mpumalanga.
Ukwehla okubandayo eBarcelona ngenyanga edlule ithinte ukubambezela amashejuli ezitimela. Lokhu kudala izinkinga ezinkulu emsebenzini wezinkulungwane zabantu ngaphezu kwengqalasizinda eyonakele. Kuwe ku-235 amalitha ngemitha eyisikwele ngehora.
Njengoba ukwazi ukubona, ukwehla kwamakhaza kungadala izimvula ezinamandla ezidala umonakalo omkhulu, zenze izindleko ezengeziwe zomnotho nokwethuka kubantu. Ngiyethemba ukuthi amadolobha angazilungiselela kangcono lezi zinhlobo zezimo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukwehla okubandayo